Mamoaka boky araka ny baikon'Andriamanitra
"Ary hoy Ilay mipetraka eo ambonin'ny seza fiandrianana: Indro, havaoziko ny zavatra rehetra. Ary hoy koa Izy: Soraty; fa mahatoky sy marina ireo teny ireo." - Apok. 21:5.
Tsy ny anabavy White tsy akory no loharanon'ireo boky ireo. Fa ireo dia mirakitra torohevitra nandritra ny fiainana izay nomen'Andriamanitra azy hiasany. Misy zava-tsarobidy ireo, fahazavana mampahery izay natolotr'Andriamanitra tamim-pahasoavana ho an'ny mpanompony mba homena izao tontolo izao koa. Amin'ny aIalan'ireo takila voasoratra ireo ity fahazavana ity no hamirapiratra ao am-pon'ny lehilahy sy vehivavy, hitarika azy ho ao amin'ny Mpamonjy. Efa nilaza ny Tompo fa ireo boky ireo dia hiely manerana izao tontolo izao. Misy fahamarinana ao amin'ireo, mpamonjy fiainana ho amin'ny fiainana ho an'izay mandray izany. Vavolombelona mangina ho an'Andriamanitra ireo.
Tamin'ny lasa dia efa ireo no fitaovana teo am-pelatanany handresy lahatra sy hanova fanahy maro. Maro no namaky azy ireo tamin'ny fo feno fanantenana, ka tamin'ny famakiana izany dia voatarika hahita ny fahombiazan'ny sorona nataon'i Kristy ary natoky ny heriny. Voatarika hijoro ho mahatoky tamin'ny fitehirizana ny fanahiny tamin'ny Mpamorona azy izy ireo, niandry sy nanantena ny fiavian'ilay Mpamonjy mba handray ireo izay tiany ho any amin'ny fitoerana mandrakizay. Amin'ny hoavy, dia mbola ireo boky ireo ihany no hilaza ny filazantsara amin'ireo maro hafa amin'ny fomba tsotra, haneho amin' izy ireo ny lalam-pamonjena.
Naniraka ny vahoakany miaraka amin'ny torolalana be dia be ny Tompo, fitsipika hanampy fitsipika, kely ery, kely ety. Tsy dia nomena lanja loatra ny Baiboly, ka dia nanome fahazavana kely hitarika ny lehilahy sy ny vehivavy ho amin'ilay fahazavana lehibe ny Tompo. Endrey ny hatsaran'ny toe-javatra raha ireo boky mirakitra ity fahazavana ity no novakina miaraka amin'ny fahavononana hanatanteraka ireo filamatra izay voalaza ao anatiny! Ho bebe kokoa ny fitandremana, hisy fandavan-tena sy ezaka matotra kokoa. Ka dia ho maro no hahita fifaliana amin'ny fahazavan'ny fahamarinana ankehitriny.
Ry anadahiko sy rahavaviko isany, miasà fatratra hanaparitaka ireo boky ireo. Raiso am-po ity asa ity, dia ho feno ny fitahian' Andriamanitra ianao. Mandehana amim-pinoana, mivavaha mba hanomanan'Andriamanitra fo maro handray ny fahazavana. Aoka ho maha-te ho tia sy manaja olona. Asehoy amin'ny fomba tsy miova fa tena kristianina ianao. Mandehana ka miasa ao amin'ny fahazavan'ny lanitra, dia ho tahaka ny dian'ny marina ny dianao, hihamazava hatrany amin'ny mitataovovonana. - RH, 20 Jan. 1903.